ဤသည်ဒစ်ဂျစ်တယ် options များအကျိုးဆောင်ရုရှားနိုင်ငံအတွက်ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်များစည်းမျဉ်းစင်တာ (FMRRC) ကလက်မှတ်အရေအတွက်က 0395 AA ကို Vv0084 အောက်မှာလိုင်စင်ရဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကလည်းဗာနူအာဘဏ္ဍာရေးန်ဆောင်မှုများကော်မရှင် (VFSC) ကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နေကြသည်။ သို့သော်ကျွမ်းကျင်သူ Option ကိုအမှန်တကယ်ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိစစ်ဆေးပေးရန် VSFC က်ဘ်ဆိုက်ရှာဖွေနေအပေါ်သို့ကျနော်တို့မဆိုအတည်ပြုချက်ကိုမတှေ့နိုငျတယျ။ အထွေထွေအန္တရာယ်သတိပေးခြင်း! သင့်ရဲ့မြို့တော်အန္တရာယ်မှာဖြစ်နိုင်ပါသည်
ပွဲစားများသည်စည်းမျဉ်းဥပဒေအရလည်းဖြစ်သည် - ဘဏ္Servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုအာဏာပိုင်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနဒင်းများ (SVGFSA)၊ ပုံမှန်အားဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောပွဲစားသည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမရှိသောပွဲစားများထက်သာလွန်သည်။ ဤပွဲစားကိုအုပ်ချုပ်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ၄ င်းတို့၏ပစ်မှတ်စျေးကွက်တွင်လည်းထည့်သွင်းနိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုမရတဲ့နိုင်ငံစာရင်းထဲက Expert Option ဟာရုရှားနဲ့အခြားအာရှနိုင်ငံတွေကကုန်သည်တွေကိုအဓိကပစ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။ ထို့အပြင် ၄ င်းတို့၏ platform ကို .ru နှင့် .com domain address မှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့၏အဓိကပစ်မှတ်စျေးကွက်၏နောက်ထပ်အထောက်အထားဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့တိကျတဲ့ features တွေအပေါ်အခြေခံပြီးကျွမ်းကျင်သူ Option ကိုဘယ်လောက်ရှိသလဲထက်ကဒီပွဲစားတစ်ခြုံငုံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုမည်သို့ပျက်ပြားကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီသီးခြား features တွေဘယ်လောက်ရှိသလဲရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဤသည်ကပိုမိုလွယ်ကူကျနော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်င့်ကတခြားလူကြိုက်များပွဲစားများဆန့်ကျင် ExpertOption နှိုင်းယှဉ်ဖို့စေသည်။ အထွေထွေအန္တရာယ်သတိပေးခြင်း! သင့်ရဲ့မြို့တော်အန္တရာယ်မှာဖြစ်နိုင်ပါသည်
ကျွမ်းကျင်သူ Option ကိုနေဆဲအွန်လိုင်းဒစ်ဂျစ်တယ်ရွေးချယ်စရာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်မျှမျှတတအသစ်ကကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့်ဥရောပနှင့်သြစတြေးလျကနေကုန်သည်များကပစ်မှတ်ထားတဲ့သူအများဆုံးပွဲစားများနှင့်မတူဘဲ ExpertOption အာရှ span ကြောင့်စျေးကွက်, ဥရောပအချို့အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်တောင်အာရှနှင့်ဗဟိုအမေရိကအပေါ်ပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်ရန်ဟန်ရှိသည်။ သန်း7ကျော်မှတ်ပုံတင်အကောင့်နှင့်အတူသူတို့န်းကျင်ခဲ့ဖူးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတော်လေးမြန်ဆန်စွာစိုက်ပျိုးပါတယ်။ ဤသည်ပွဲစားကိုသင်ကောင်းစွာထူထောင်ပလက်ဖောင်းထဲတွင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အများဆုံး features တွေပေးထားပါတယ်။ သို့သော်သူတို့သည်မြင့် 95% ထိရောက်ပြန်လာ, cryptocurrencies နှင့်5ကွဲပြားခြားနားသောအကောင့်အမျိုးအစားကြီးမားတဲ့စာရင်းကတဆင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုခွဲခြားဖို့ကြိုးစားပါ။ စိတ်ဝင်စားစရာထိရောက်စွာပြန်လာပြောဆိုချက်ကိုကုန်သည်များအနေဖြင့်အများဆုံးတိုင်ကြားမှုများရေးဆွဲထားပြီးအရာဖြစ်တယ်။ သငျသညျအောင်မြင်သောအရောင်းအထံမှထိရောက်သောပြန်ကျပွောငျးလဲနေသောစိတ်ထဲမထားပါဘူးလျှင်ခြုံတဲ့ Expert Option ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရကျိုးနပ်သည်။ သင်တစ်ဦးထက်ပိုသောကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်တင်းကျပ်စွာစညျးမဉျြးစညျးကမျးပွဲစားအတွက်ကုန်သွယ်ပိုနှစ်သက်လျှင်အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါတို့ဒီနေ့သင်ရရှိနိုင်သည့် CySEC သို့မဟုတ် ASIC စညျးမဉျြးစညျးကမျးပွဲစားတဦးကိုရွေးချယ်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ အထွေထွေအန္တရာယ်သတိပေးခြင်း! သင့်ရဲ့မြို့တော်အန္တရာယ်မှာဖြစ်နိုင်ပါသည်
ကျွမ်းကျင်သူရွေးချယ်မှုသည်ထပ်မံ ၀ င်ငွေရရှိစေရန်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။ Главноеиметьголову။ выплатыполучаюбезпроблем
ကျွမ်းကျင်သူရွေးချယ်မှုသည်အမြဲတမ်းမွန်ဂိုနှင့်လက်အောက်ငယ်သားများဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ထိုကုမ္ပဏီများသည်
ကျွမ်းကျင်သူရွေးချယ်မှုသည်အမြဲတမ်းမွန်ဂိုနှင့်လက်အောက်ငယ်သားများဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Убедилсясам, чтоможнод
ကျွမ်းကျင်သူရွေးချယ်မှုအပေါ်Вчеравышлаочереднаявыплата, чтояработаюплатформой, яработаювнадежномиудобном
မင်္ဂလာပါကြောင့်သော Ira နှင့် Binary နှိပ်စက်ခံရသူ၏စားပွဲခုံကအတည်ပြုထားပြီးတိုင်းတဦးတည်း expert options ကလိမ်လည်မှုပွဲစားဖြစ်ပါတယ်။ ယောက်ျားတွေသတိထားပါ အားလုံး jeffersonbruse51 @g mail ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏ကြယ်များအားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ com အကျိုးစီးပွားအပါအဝင်ငါဆုံးရှုံးခဲ့ရအားလုံး, ငါ့ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ကူညီပါ။ ကျွမ်းကျင်သူအကျိုးဆောင်သည်ကျွန်ုပ်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုသည်ယူရို ၁၆၇၀၀ ကိုလိမ်ညာခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးနောက်သူတို့ကအမြဲတမ်းပို။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဘာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမေးမြန်းပြီးကိုယ့်ရဲ့ရပ်တည်ချက်ကိုရပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာကျွန်တော့်ရဲ့အီးမေးလ်တွေကိုမခေါ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ခဏကြာတော့သူတို့ကကျွန်တော့်အကောင့်ကိုဝင်ခွင့်ကိုငြင်းလိုက်တယ်။ ငါအကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားပြီလို့ထင်တယ်။ ၃၆၅ အရောင်းအဝယ်မှသူ၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသူအချို့နှင့်ပတ်သက်သောသက်သေခံချက်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ငါ jeffersonbruse16,700 @g mail ကိုဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ သူကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာငါ့ကိုကူညီပေးတဲ့သူပါ။ ကျွန်မရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းပေးခဲ့တယ်။ ထွက်ရှိအသီးအသီးသတိထားပါပေးပါ။ Binary options သည် ၂၁ ရာစုလိမ်လည်မှုဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သူတို့နှင့်မရင်းနှီးပါနှင့်။ သင်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကယ်တင်ရန်နှင့်သူတို့၏ ၀ င်ငွေကောင်းသောဆုံးရှုံးမှုကိုဆုံးရှုံးသောသူတို့အတွက်ဂျက်ဖ်ဖာဆန်သည်သင်၏တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာဖြစ်သည်။
ငါသည်ဤဖတ်နေသင်သည်သင်၏အတွေ့အကြုံအနည်းငယ်မျှဝေချင်, ငါပွဲစားများနှင့်အကောင့်မန်နေဂျာမှပိုက်ဆံဆုံးရှုံးနေတဲ့ဒီ Binary, Bitcoin, Forex စသည်တို့ကုန်သည်များမှအခြားသူများကိုကယ်တင်ရန်ဤဝေမျှဖို့ရှိသည်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အမြတ်ငွေရရှိရန်မျှော်လင့်ပြီးဒေါ်လာ ၉၅၀၀၀ ဒေါ်လာကို Binary option တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ပွဲစားသည်ကျွန်ုပ်၏ထုတ်ယူရန်တောင်းဆိုမှုကိုမပြုလုပ်မီအပိုအခကြေးငွေတောင်းခံခြင်းမှာအံ့သြစရာကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ငွေအားလုံးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးငွေစာရင်းကိုရပ်ဆိုင်းသွားသောအခါကျွန်ုပ်သည်ငွေပေးချေမှုအားလုံးကိုလုပ်ရန်ကြိုးစားသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ခြေလှမ်းများကိုမသိသောကြောင့်စိတ်ပျက်မိပြီးစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အကောင့်ကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ရန်ကူညီနိုင်သည့်အေဂျင်စီအချို့နှင့်ဆက်သွယ်ခဲ့သည်၊ ကုန်သည်ရန်ပုံငွေကိုအထူးပြုတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုကျွန်တော်မတွေ့မချင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုအတွက်ပေးတဲ့သူတို့ရဲ့အီးမေးလ်ကိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်ခဲ့တယ်။ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတောင်းခံရန်တောင်းခံခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ရန်ပုံငွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ ငါဒီလိုမျိုးအံ့ဖွယ်အမှုကိုတစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး၊ ၃-၄ ရက်အတွင်းငါ့အကောင့်ထဲ ၀ င်ပြီးငါ့ရဲ့အမြတ်တွေအပါအ ၀ င်ငါ့ပိုက်ဆံအားလုံးကိုနုတ်ပစ်လိုက်တယ်၊ အဲဒါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအပျော်ရွှင်ဆုံးနေ့ပဲ။ ပွဲစားများ (သို့) အကောင့်မန်နေဂျာများသို့၎င်းတို့၏ငွေများဆုံးရှုံးခဲ့ရသောသူများ၏ငွေများကိုမည်သို့ပြန်ရနိုင်မည်ကိုလက်မခံနိုင်သောသူများအတွက်ဤအချက်ကိုမျှဝေနေပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ရန်ပုံငွေများကိုမည်သို့ပြန်လည်ရယူနိုင်မည်နည်းဟုအီးမေးလ်ဖြင့် ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။ အီးမေး - Fundrecoverydesk @ gmail ။ com
ငါသည်ဤဖတ်နေသင်သည်သင်၏အတွေ့အကြုံအနည်းငယ်မျှဝေချင်, ငါပွဲစားများနှင့်အကောင့်မန်နေဂျာမှပိုက်ဆံဆုံးရှုံးနေတဲ့ဒီ Binary, Bitcoin, Forex စသည်တို့ကုန်သည်များမှအခြားသူများကိုကယ်တင်ရန်ဤဝေမျှဖို့ရှိသည်ထင်ပါတယ်။ ငါမျှော်လင့်ပါတယ် Binary option ကိုအတွက် $ 95,000 USD ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်
ပတေရုသ - နိုဝင်ဘာလ 20, 2019 @ 18: 50
David Richard - နိုဝင်ဘာလ 21, 2019 @ 08: 13
အတော်အတန်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သောအဆင်ပြေသည့်ပွဲစားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်နှင့်သူတို့အလုပ်လုပ်သည်။ တိုင်ကြားစာမရှိပါ။ ပေးဆပ်ပါ၊
ခရစ် - နိုဝင်ဘာလ 22, 2019 @ 20: 31
တိုနီ - နိုဝင်ဘာလ 24, 2019 @ 09: 15
Thorgalv - နိုဝင်ဘာလ 24, 2019 @ 14: 11
Georg - နိုဝင်ဘာလ 25, 2019 @ 12: 36
Grundlagen des Handels မှကျွမ်းကျင်သောရွေးချယ်မှုသည်အွန်လိုင်းနှင့် Schulungsressourcen အတွက်ဖြစ်သည်။
Brandon - နိုဝင်ဘာလ 25, 2019 @ 19: 04
Barna - နိုဝင်ဘာလ 26, 2019 @ 09: 40
တစ် ဦး, တစ် ဦး ExpertOption ကိုဖွင့်လှစ်, တစ် ဦး သည်megabízhatónakérzimagát, စိတ်ထဲရှိ csak tőledfügg
အော့တို - နိုဝင်ဘာလ 26, 2019 @ 19: 35
ဝီလျံ - နိုဝင်ဘာလ 27, 2019 @ 10: 17
ကုန်သည်များအနေဖြင့်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းများကိုရွေးချယ်ပြီးသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့် la plate-forme presque parfaite pour la pratique ။
အော့တို - နိုဝင်ဘာလ 27, 2019 @ 19: 06
ငါ့အဘို့, လက်ရှိအခြေအနေများအောက်တွင်ဤသည်ကယ့်ကိုကောင်း option ကိုဖြစ်ပါတယ်။
ရောဘတ် - နိုဝင်ဘာလ 29, 2019 @ 08: 30
एक्सक्लूसिवप्लेटफॉर्मपरकामकरनेकेलिएव्यक्तिगतरूपसेमेरेलिएयहबहुतसुविधाजनकहै, मैंनेइनलोगोंकेबारेमेंबहुतकुछपढ़ाहै, लेकिनजबतकआपइसेस्वयंनहींआजमाते, तबतकआपसमझनहींपातेकिक्याहै။ ငါ၏အယောင်ကိုဆောင်။ ပေါ်လာသဖြင့်လူအများတို့ကိုလှည့်ဖြားကြလိမ့်မည်။
ဒါဝိဒ်သည် - နိုဝင်ဘာလ 30, 2019 @ 07: 19
ယခုအချိန်တွင် ExpertOption သည်ရွေးချယ်စရာများနှင့်မီးလောင်ရာလေပင့်များဖြစ်သည်။ သငျသညျ moins, je l'aimais beaucoup ပေါင်း que les autres au ဝေဒနာ။
Holt - ဒီဇင်ဘာလ 2, 2019 @ 10: 15
ကျွမ်းကျင်သူရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများနှင့်အခြားဆက်တင်များအသုံးပြုရန်စွမ်းရည်သည်အစပြုသူတစ် ဦး လိုအပ်သည်
အမ်းစထရောင်း - ဒီဇင်ဘာလ 9, 2019 @ 05: 27
Expertoption သည်သရုပ်ပြအကောင့်ကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးသည်၊ ၎င်းသည်သင့်၏ဘဏ္marketာရေးဈေးကွက်တွင်အပ်ငွေဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်မရှိဘဲ binary options အသစ်အတွက်နည်းဗျူဟာအသစ်တစ်ခုကိုစမ်းသုံးရန်သို့မဟုတ်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည်ကိုအကဲဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
Gehrig - ဒီဇင်ဘာလ 10, 2019 @ 06: 30
ExpertOption သည် Wenn Sie မှကျွမ်းကျင်သူများ, Plattform einwandfrei funktioniert, Indie စင်တာမှ Klick ein Demokonto, ၌တည်ရှိသည်, ExpertOption ကို, ဒီနေရာကိုသွား။
Delalhala - ဒီဇင်ဘာလ 12, 2019 @ 05: 18
ExpertOption တွင်ကွန်ပျူတာညွှန်းကိန်းများအပါအ ၀ င်နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိရိယာများအပြည့်အစုံရှိသည်
Didier - ဒီဇင်ဘာလ 15, 2019 @ 05: 26
remise, remon ဆုကြေးငွေ, systèmeအမြင့်ဆုံးဆုကြေးငွေအတွေ့အကြုံရှိ ExpertOption ကို။
Diefenbach - ဒီဇင်ဘာလ 17, 2019 @ 05: 11
ကျွမ်းကျင်သော Plattform ဂီယာကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သော Monat သည်အခြားဒီဇိုင်းများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နေသည်။ ထိုအရာသည်အလွန်ထူးဆန်းသည်။ Eindruck သည်၎င်းမှာ Edenruck ဖြစ်သည်။
ဖာနန်ဒို - ဒီဇင်ဘာလ 21, 2019 @ 05: 37
Pierre-Louis - ဒီဇင်ဘာလ 21, 2019 @ 19: 36
အတွေ့အကြုံရှိသူတစ် ဦး အနေဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးနှင့်အရည်အသွေးပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ - ကုန်သည်တစ် ဦး သည်အတွေ့အကြုံရှိသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
Hubbard Dwain - ဒီဇင်ဘာလ 25, 2019 @ 08: 10
Expertoption ကုန်သွယ်မှုသည်ယခုအချိန်တွင်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်ပြhereနာများကိုမည်သူမျှမပျော်နိုင်၊ ကုန်သည်များအားပံ့ပိုးမှုသည်အလွန်အေးဆေးပါ!
Arajinn - ဒီဇင်ဘာလ 25, 2019 @ 18: 28
EO ဒင်္ဂါးများ၏ကိုင်ဆောင်သူများနှင့်အသုံးပြုသူများအတွက် expertoption စီမံကိန်းပလက်ဖောင်းအားလုံးအတွက်အထူးလျှော့စျေး၊
ဗာဂျီးနီးယား - ဒီဇင်ဘာလ 28, 2019 @ 04: 48
Sono abbastanza soddisfatto di Expertoption ။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊
Stephan - ဒီဇင်ဘာလ 29, 2019 @ 20: 05
Expertoption Unternehmen, Arbeit, angenehm genug für die Arbeit, wie für mich ။ Gundinn, grich, mich über seine Arbeit zu beschweren - alles funktioniert gut, aber der Gewinn
ချစ်သူ - ဒီဇင်ဘာလ 31, 2019 @ 09: 22
ငါရိုးသားငွေပေးချေမှုနှင့်ပတ်သက်။ စိုးရိမ်ပူပန်ကြဘူးဘယ်မှာကုန်သွယ်တွေ့ရှိခဲ့အလွန်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်, အရာအားလုံးအတွက် expertoption ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Fenrizuru - ဇန်နဝါရီလ 2, 2020 @ 18: 18
ကောင်းမွန်သော expertoption ပလက်ဖောင်းတစ်ခု၊ ကောင်းသောရာခိုင်နှုန်းနှင့်ငွေပေးချေမှုများကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်အချိန်မီပြုလုပ်သည်။ ငါအရာအားလုံးနှင့်အတူပျော်ရွှင်မိပါတယ်။
Simen - ဇန်နဝါရီလ 4, 2020 @ 04: 50
ကျွမ်းကျင်မှုသည်လက်တွေ့ကျသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်သည်။ Handel မှ zu beginnen ။ Höhe von nur in Ihre Einzahlung, reicht es aus, reicht es aus, z mit beginnen 10 USD aufzufüllen
Eskildsen - ဇန်နဝါရီလ 5, 2020 @ 05: 52
Los Angeles မြို့သမဝါယမက de los corredores Expertoption သားကို adecuados tanto para lant corerciantes စမ်းသပ်မှု။ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း
Auririm - ဇန်နဝါရီလ 7, 2020 @ 09: 21
ငါအရမ်းထိုက်တန်နှင့်မှာအားလုံးပြproblemsနာများနှင့်အတူ, expertoption ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်အလုပ်ကိုအလွန်ကျေနပ်မိပါတယ်။
သွေးတွေ - ဇန်နဝါရီလ 17, 2020 @ 20: 20
ကောင်းမွန်သောအခွင့်အလမ်း, ကျွမ်းကျင်သူ, ငါ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် gratamente ။ တစ်စုံတစ်ရာသောအမှုအရာသည်သင်၏ပြည့်ဝစုံလင်သောစေတနာ့ဝန်ထမ်းဖြစ်သည်။
တဆယ်ခြောက် - ကိုး =
သုံးသပ်ချက်များ: 210 အသုံးပြုသူပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
က AUTHOR RATEUser rating (252)